दिनभरिको प्रमुख समाचार - भरोसा खबर
तपाइको कुनै पनि सल्लाह, सूझाव तथा समाचार बन्न योग्य कुनै पनि सूचना तथा जानकारी छन् भने तुरून्तै खबर गर्नुहोस। हाम्रो फोन:९८५११५६८६४ वा इमेल:info@bharosakhabar.com, news@bharosakhabar.com
दिनभरिको प्रमुख समाचार
श्रावण २६, २०७७ काठमाण्डौ ।
⇒लामो दूरीका सवारी र हवाइ उडान भदौ १५ सम्म बन्द
सरकारले लामो दूरीका सवारी र हवाइ उडान भदौ १५ सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण झन् फैलन थालेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि भदौ १ गतेदेखि चल्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले २ सय भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा यातायातका साधान भित्रिने र बाहिर जान नदिने निर्णय गरेको छ । कोरोनाका बिरामीहरूको संख्या २ सयभन्दा बढी भएका जिल्लाहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधानहरुलाई भित्रिन र बाहिरिन नदिने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै सरकारले भदौ मसान्तसम्म सीमा नाकाहरु बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
⇒भदौ १५ सम्म शैक्षिक संस्था र भर्ना अभियान बन्द गर्ने निर्णय
सरकारले भदौ १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १५ सम्म भर्ना अभियान तथा तोकिएका परीक्षाहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यसअघि भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
समुदायस्तरमा कोरोना फैलन थालेपछि यसअघि तोकिएका परीक्षा अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।
⇒गोंगबुमा शव भेटिएका बोहराको हत्यामा संलग्न आशंकामा चितवनबाट एक महिला पक्राउ
आइतबार बिहान गोंगबुमा सुटकेसभित्र शव भेटिएका कृष्णबहादुर बोहराको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले चितवनबाट एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । चितवनका प्रहरी प्रमुख नान्तीराज गुरुङका अनुसार पूर्वी चितवनको माधवपुर क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
काठमाडौं गएको प्रहरी टोलीले उनलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याउँदैछ । शनिबार बिहान गोंगबुमा एउटा सुटकेसमा शव र केहीपर अर्को झोलामा टाउको फेला परेको थियो । आइतबार मात्रै शव रोल्पा स्थायी घर भइ दाङमा बसाई सरेका र अहिले काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका कृष्णबहादुर बोहराको भएको खुलेको थियो ।
⇒पछिल्लो २४ घन्टामा थपिए ३३८ कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या २३ हजार ३१० पुग्यो
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस बिफ्रिङका क्रममा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यसको पुष्टि गरेका हुन् । ८ हजार ४ सय ३२ नमुना परीक्षण गर्दा थप ३३८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हाे ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घन्टामा निकाे भएर १ सय ४० डिस्चार्ज भएका छन् । याेसँगै हालसम्म निको हुनेहरुको संख्या १६ हजार ४ सय ९३ जना पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा थप ४ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । याेसँगै मृतकको संख्या ७९ पुगेको छ ।
⇒नेपालमा कोराेनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु
छिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा कोराेनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस बिफ्रिङका क्रममा सोमबार प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यसको पुष्टि गरेका हुन् ।
⇒काठमाडौं उपत्यकामा थप ४४ जनामा कोरोना
पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौंका ३६ जना, ललितपुरका ४ जना र भक्तपुरका ४ जनामा थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस बिफ्रिङका क्रममा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यसको पुष्टि गरेका हुन् ।
« Previous post: अघिल्ला
» Next post: पछिल्ला
देश बिकासमा युवाहरूको भुमिका महत्त्वपूर्ण पूर्व सभासद आले
भरोसा खबर तनहुँ सम्वाददाता १५ फाल्गुन : संविधान सभाका सभासद माननीय झुल बहादुर आले ले देशको बिकासमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनुभएको छ । आ....
“रिठेपानी डाँडो काट्न विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन”
भरोसा खबर संवादाता १५ फाल्गुन २०७७ - नेपाल सरकार को राष्टिय गौरवको आयोजना मध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एक हो । यश क्षेत्रको बिकासका ल�....
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछीको स्टेपहरु के के हुन सक्छन् ?
भरोसा संवाददाता, ११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन �....
विप्लवको चन्दा आतंक
१९ भदौ, काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुराष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई भनेअनुसार चन्दा नदिए आक�....
सूचना र प्रविधिले ज्ञानको क्षितिज बढाउँछ : मन्त्री भण्डारी
सुर्खेत, १ मङ्सिर (रासस) : कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सूचना र प्रविधिले ज्ञानको क्षितिज बढाउने बताउनुभएको छ....
घुस लिँदै गरेको अवस्थामा तीन कर्मचारी पक्राउ
नेपालगञ्ज, २६ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कोहलपुरले यहाँस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रका तीन जना कर्मचारीलाई सेवाग्राह�....
विवादित अध्यादेशबीच नेकपा स्थायी समिति बैठक आज बस्दै
भरोसा संवाददात, काठमाडौं, पुस १, २०७७ । विवादका चाङ्गबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । बालुवाटारमा दिउँसो १ बजे बस्ने ....
डाक्टर केसीको जीवन तलमाथि भए प्रधानमन्त्री शत प्रतिशत दोषी : गगन थापा
भरोसा संवाददाता, काठमाडाैं, १९ असाेज । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्र�....
Bharosa Khabar Nepal
Phone No : 9851156864
Location : Jainkhel Sunaokthi, Lalitpur 26
Email : logosmedianetwork@gmail.com
copyright © 2019 Bharosa Khabar Nepal. All Rights Reserved
developed & designed by: Momtech